How to live with Hepatitis C positive person စီပိုးရှိသူနဲ့ အတူနေရသူတွေ – Mawlamyine Daily
How to live with Hepatitis C positive person စီပိုးရှိသူနဲ့ အတူနေရသူတွေ
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဆောင်းပါး	 July 8, 2018 July 8, 2018 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၈
၁။ အဖေက အသက် ၅၇ပါ အသည်းချောက်နေတာပါ ဆေးရုံတက်ဖူးပါတယ် Cပိုးလည်းတွေ့တယ်ပြောပါတယ် Cပိုးကောင်ရေက ၂၆သိန်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုးရိမ်ရပါသလားဆရာ Bပိုးကာကွယ်ဆေးတော့ဆေးရုံကထိုးပေးပါတယ် Cပိုးဆေးကတော့မထိုးရသေးပါဘူး မိ့သားစုတွေရောမကူးအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလည်း ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလည်း မိ့သားစုထဲမှာ ကိုယ်ဝန်၂လကျော်ရှိတဲ့သူရှိလို့ပါ
စိုးရိမ်လို့ ရေးရတယ်။ မိသားစုလို့ ရေးရတယ်။ အသည်းခြောက်လို့ ရေးရတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ မြန်မာစာလုံး ဆက်မရေးသင့်ပါ။
၂။ မင်္ဂလာပါ။ ယောက်ျားလေးပါ။ အသက် ၄၈ နှစ်၊ အိမ်ထောင်ရှ။ိ C ပိုးသေဆေးသောက်ပြီး ပျောက်ကင်းပြီးသားပါ။ အိမ်ထောင်ဖက်မှာ C ပိုးရှိနေ အကာကွယ်မယ့်လိင်ဆက်ဆံလျှင် ကျွန်တော့ကို C ပိုးပြန်လည်ကူးစက် နိုင်ပါသလားခင်ဗျား။
၃။ ကျွန်မယောက်ခမပါ။အသက်က ၅၂ ရှိပါပြီ။ AIDS က လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ထဲက ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ငါးလလောက်က အသဲခြောက်ပြီး cပိုးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဝမ်းလဲခဏခဏလျောပါတယ်။ ပြီခဲ့တဲ့လက သွေးအန်ပြီး သွေးဝမ်းတွေသွားလို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ပါတယ်။ ဆရာကတော့ အသဲတော်တော်ခြောက်နေပြီလို့ပြောတယ်ရှင့်။ လူကတော့ ပိန်တာလေးဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်မက ကလေးရှိတော့ ဘယ်လိုကူးစက်တတ်လဲသိချင်လို့ပါရှင့်။
cပိုးလို့ရေးတာ အတော်အဖတ်ရခက်တယ်။ အဲလိုရေးမေးသူတွေ မနည်းပါ။ ကူးဆက်လို့ရေးတာကိုလည်း ပြင်လိုက်တယ်။ အဲလိုမှားသူတွေ မနည်းပါ။
၄။ ဆရာရှင့် မိသားစုဝင်ထဲမှာ C ပိုးရှိတဲ့သူရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးမှာ ကူးစက်နိုင်လဲရှင့်။ ချွေးကနေရော C ပိုး ကူးစက်နိုင်လားရှင့်။
စီပိုးကာကွယ်ဆေး မရှိသေးပါ။ သွေးမစစ်ဘဲ သွင်းတာ၊ သွေး-သွေးချင်းထိတာ၊ ဆေးထိုးအပ် သီးခြားမသုံးတာ၊ နားကပ် လဲဝတ်တာ၊ မုတ်ဆိပ်ရိတ်ဒါး၊ သွားတိုက်တံ၊ လက်သဲညှပ် တွဲသုံးတာ၊ တက်တူးထိုးတာ၊ ဟိုနေရာ ဒီနေရာ ကွင်းတပ်တာတွေကနေ ကူးရတာပါ။ (ဓါးလို့ရေးတာလည်း မှန်တယ်။)
လိင်ဆက်ဆံရာကနေမကူးစက်ပါဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေကမများပါ။ သုတေသနတွေ လုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) လိင်ဆက်ဆံဘက် များသူတွေ၊ (၂) ဆက်ဆံဘက်မှာ တခြားလိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ တခုခုရှိနေရင်၊ (၃) လိင်ဆက်ဆံတာ ကြမ်းတမ်းရင်၊ ကူးစက်ဘို့ အခွင့်အလမ်းပိုမယ်။
မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူတွေ၊ သွေးနဲ့ သွေးထဲကပစ္စည်း သွင်းနေရသူတွေ၊ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းလှူတာ လက်ခံရသူတွေ၊ ကျောက်ကပ် ဆေးနေရသူတွေ၊ ဆေးရုံ-ဆေးခန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေရသူတွေ၊ HIV ပိုးရှိနေသူတွေ၊
စီပိုးရှိတဲ့မအေကနေကလေးကို ၄-၅% လောက်သာ ကူးစေနိုင်ပါတယ်။ ဖအေမှာ စီပိုးရှိနေပေမဲ့ သူ့ကလေးကို သွေးမထိမချင်း မကူးဘူး။ လိင်လမ်းကနေကူးတာကလဲ HIV နဲ့ B တို့လောက် မဟုတ်ပြန်ဘူး။ တလင်တမယား လိင်ကနေကူးတယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ စီပိုးရှိနေတဲ့ မိခင်ရဲ့ကလေးတွေမှာ ကူးနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပွင့်နေတယ်။ ပိုးရှိတဲ့မအေက နို့တိုက်တာနဲ့ မကူးပါ။ ရာသီသွေးကတော့ ကူးနိုင်တယ်။
စီပိုးရှိနေသူချက်ပြုတ်တာစားမိလို့ မကူးပါ။ လက်တွဲလျောက်တာ၊ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုး၊ တအိမ်တည်း အတူနေတာနဲ့လဲ မကူးဘူး။ ချွေး၊ သွားရည်၊ မျက်ရည်တွေကနေမကူးပါ။ တအိမ်ထဲအတူနေသူတွေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များတာ မတွေ့ရသေးပါ။ ကူးမယ် ဆိုတာလဲ သွေးကနေ ဝင်လို့သာ ဖြစ်ပါမယ်။ ပန်းကန်၊ ဇွန်း၊ ဖန်ခွက်၊ အိုး-ခွက် အတူသုံးလို့ မကူးပါ။ ရင်ချင်းအပ်-ပါးချင်းကပ်-လက်ဆွဲ နုတ်ဆက်တာတွေကနေ မကူးပါ။ အသာအယာ နုတ်ခမ်းချင်းစုပ်တာနဲ့လဲ မကူးပါ။ ရေအတူသောက်လဲ မကူးပါ။ ခြင်နဲ့ အင်းဆက်ပိုးတွေကနေကူးစက်တာမတွေ့သေးပါ။
စီပိုးရှိနေသူဟာ သွေးမလှူရပါ၊ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမလှူရပါ၊ သုတ်ပိုးမလှူရပါ။
• သွေးစစ်လို့ စီပိုးတွေ့ပေမဲ့ ၇ဝ-၈ဝ% မှာဘာမှ မခံစားရသလိုရှိနေမယ်။ ခံစားရသူတွေမှာလဲဆိုးတာမပါဘူး။ ကိုယ်ပူ၊ အားယုတ်၊ အစားပျက်၊ ပျို့ချင်၊ အန်ချင်၊ ဗိုက်နာ၊ ဆီးအရောင်ရင့်၊ ဝမ်းအရောင်ပျော့၊ အဆစ်နာ၊ ဆီး-အသားအရေ-မျက်လုံး ဝါ၊ ရက်တိုရောဂါလက္ခဏာတွေဟာကူးစက်ပိုးဝင်လာခဲ့တဲ့နောက် ၆-၇ ပါတ်အကြာမှာ ဖြစ်တယ်။ တချို့မှာ ၂ ပတ်ကနေ ၆ လ လဲ ကြာနိုင်တယ်။
• နာတာရှည် နာတာရှည်အသည်းရောင်တာဆိုတာဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါတခု ဖြစ်တယ်။
• ၅-၂ဝ% ဟာ အနှစ် ၂ဝ-၃ဝ အတွင်း အသည်းခြောက်တာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• ၁-၅% ဟာ အသည်းခြောက်တာ ဒါမှမဟုတ် အသည်းကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးနိုင်တယ်။
1. Advances in Medications to Treat Hepatitis C http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/advances-in-medications-to-treat.html
2. Cheap medicine for hepatitis C အသည်းရောင် (စီ) ဆေး ဈေးချိုချိုနဲ့ရနိုင်တော့မည် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cheap-medicine-for-hepatitis-c.html
3. Chronic hepatitis C medicines အသည်းရောင် (စီ) အတွက်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/chronic-hepatitis-c-medicines.html
4. Effects of Hepatitis C on the Body အသည်းရောင် (စီ) ပိုးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်သက်ရောက်မှုများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/effects-of-hepatitis-c-on-body.html
5. FDA Approved Treatments for Hepatitis C http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/fda-approved-treatments-for-hepatitis-c.html
6. Hepatitis C (စီ) ပိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hepatitis-c.html
7. Hepatitis C latest အသည်းရောင် (စီ) ပိုး နောက်ဆုံးအခြေအနေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hepatitis-c-latest.html
8. Hepatitis C links http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hepatitis-c-links.html
9. Hepatitis C medicine Sovaldi အသည်းရောင် (စီ) အတွက်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sovaldi.html
10. Hepatitis C Mothers (စီ) ပိုးရှိ မိခင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hepatitis-c-mothers.html
11. Hepatitis C Treatment and Management အသဲရောင် (စီ) ဘယ်လိုကုသလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hepatitis-c-treatment-and-management.html
12. Hepatitis C Treatment အသည်းရောင် (စီ) ဆေးသစ်အလားအလာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hepatitis-c-treatment.html
13. Hepatitis C Viral Load (စီ) ပိုး (ဗိုင်ရယ်လ်-လုဒ်) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hepatitis-c-viral-load.html
14. Medication Regimens According to HCV Genotype http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/medication-regimens-according-to-hcv.html
15. Mothers with Hepatitis C (စီ) ပိုးရှိ မိခင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/mothers-with-hepatitis-c.html
16. Pregnancy and Hepatitis C အသဲရောင် (စီ) နဲ့ ကိုယ်ဝန် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hepatitis-c.html
17. Sovaldi အသည်းရောင် (စီ) အတွက်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sovaldi.html
18. Treatment of HCV Genotype 1 အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနိုအမျိုးအစား (၁) ကုသခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/treatment-of-hcv-genotype-1.html
19. Treatment of HCV Genotypes အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနိုအမျိုးအစားအလိုက်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/treatment-of-hcv-genotypes.html